Usati unogona zvechokwadi Spanish tapas, piazzas muRoma, kana matenga edenga muPrague, inokosha zvishoma arun runodiwa! Zvichitaurwa zviri nyore, zvikuru agadzirira muri kana waronga rwendo Europe, zvikuru mikana yako kunakidza uye mupfungwa isina rwendo kuti anorarama zvaunotarisira.
Saka pano pane Save A Train chitima: sarudza pamusoro shanu, tinofanira-kaksi kuti European ushingi! Zvimwe kunwa ari Hofbrauhaus mu Munich, kana achitora Canal rwokuparidza mu Amsterdam, kana kuongorora David-kubva pamakona zhinji – muna Florence. Zvose zviri, cherechedza avo pasi uye kuronga rwendo kwenyu vakavapoteredza. Nani nokuda nezvitima.
muromo 4: Unganidza zvinyorwa zvako zvekufambisa sechikamu cherongwa rwendo kuenda kuEurope
Sezvambotaurwa pamberi, zviri nyore kuzvipira-uye kuyedza kusvina zvakanyanya. It zvachose kunzwisisika. anosiya Your anokosha anofanira kushandiswa zvakanaka, saka zviri nyore kuedza pamusoro-kurongedza itineraries yenyu kana kuronga rwendo Europe. zvisinei, ichi kunogona kudhura (tisingatauri netesa), sezvo pamusoro-kurongedza nzendo pamwe dzokugara vakawandisa zvishomanana mazuva kunotungamirira nguva yakawanda mumugwagwa, uye zvimwe gasi kana chitima matikiti. In Muzviitiko, inogona kuvhiringidza rwendo, vanoshandura ndokuita akamhanya kuti hotera Check-dzi uye tarisa-outs (nguva dzose chiputiriso uye kubudisa), pandaiona kumbobvira-akashanyira nzvimbo rudzi apfuura chitima mahwindo. kana zvichibvira, Dzora. uchasvika tichengetedze zvokufambisa uye kuwana nguva yakawanda kuongorora nzvimbo dzako.
zano redu kudzokera pakarepo kuti ATM kana wasvika munyika Europe mumusiye mari uchishandisa kwako ATM kadhi. Hazvina nyore, uye Gengi kuti usvike nokuti kutengeserana ranyura zvechokwadi nani kupfuura chero zvazvingava hatina kunyange yakawanikwa kubva kumba nemabhangi. Dana bhangi yako usati wabva kubvunza pamusoro dzakawanda ATM mutengapwe yechikoro, uyewo achivaudza kuti unenge uchishandisa kadhi rako kunze. Kana musingavaregereri kuvaudza, zvinogona kuvanyevera kuti vafunge kuti humbavha, uye achaita kuvhara kadhi rako. wo, bvunza kana bhangi wako ane dzakawanda nzvimbo kana kudyidzana pamwe vemunzvimbo Banks Europe.
muromo 9: Usakanganwa kufonera wako anotakura nhare usati waronga rwendo kuenda kuEurope
Dana keriya yako kamwe iwe wakakwana kuronga rwendo Europe uye kuwana urongwa Iniadd aunoda kushandisa foni yako, uye ipapo nechokwadi iwe kumisa foni yako kudzivisa netsaona mashoko mhosva (mu pfupi: kudzima cellular Data uye kurambidza uwandu Apps kuti anogona kushandisa cellular mashoko). uye, sezvo hurongwa, kunamatira kusunungura Wi-Fi network kuti kudhanilodha ndichivatuma na, kutarisa Webhu, uye kushandisa Apps. Europe ine vazhinji WiFi hotspots, saka iwe haungavi hazvichaenderani kwenguva. Nerumwe, kutenga SIM kadhi kuti foni yako paunosvika Europe.
Users vanotanga achida guta kutanga uye kupedzisa mu (nokuti ikozvino, zvinodikanwa kutanga uye kugumisa rwendo panzvimbo). Wobva wasarudza zuva rekuenda, refu kuti rwendo vachava uye vangani dzokugara kubatanidza. Users anogona sarudza kana vachida kutarisa maguta Europe, European Union, kana kungori iyo Schengen Zone. The Anwendung achabva pave avaiita, kupedza pamwe Airbnb prices muguta rimwe nerimwe, nokuti avo pamusoro bhajeti.
Vafambi vanogona kushandisa ari Eightydays Website or the newly launched iOS App to plan their European voyages.